Kuala Lumpur, Eprel 6 (AFP) - dịka nke elekere 12 nke taa, akwụkwọ akụkọ coronavirus dị na Malaysia ekwuputala ikpe 131 na ọnwụ 62, na-ebute ọnụ ọgụgụ nke ikpe ahụ enwetara na 3,793. Taa, a chụpụrụ mmadụ 236 n'ụlọ ọgwụ, na-ebute ọnụ ọgụgụ ndị gbakere na 1,241.
Na mgbakwunye, dị ka minista na-ahụ maka ụgbọ njem ndị Malaysia si wei jiaxiang leta, Malaysia esi na China butere akwa 100 dị mma maka ngalaba nlekọta nlekọta kpụ ọkụ n'ọnụ n'ụgbọ mmiri mbụ. Ewegara akwa 28 dị rute na Malaysia ụbọchị gara aga ụnyaahụ ma ziga ha n'ụlọ ọgwụ gọọmentị ọtụtụ ụnyaahụ. .
O kelere ntọala mba mmanụ maka mmesapụ aka ya nke 100 akwa na ngalaba nlekọta ahụ ike maka ngalaba ahụike maka ịgwọ ndị ọrịa coronavirus.
E nyere iwu akwa site na hebei pukang medical health co., Ụlọ nrụpụta akụrụngwa kasịnụ na hebei, China.Currently, ọtụtụ mba ụwa niile gụnyere Italy, Spain, United Kingdom na United States, na-atụ akwa si China maka jiri na ngalaba nlekọta ahụike.
Dabere na minista na-ahụ maka njem ụgbọelu nke Malaysia wei jiaxiang, “ọ naghị adị mfe iwebata akwa ndị a, nke ọ bụla ruru 250kg, n'ime obodo anyị. Ministrylọ ọrụ na-ebugharị ga-ahazi ụgbọ elu atọ iji wetara akwa ndị a na mba anyị.
Ebe gọọmentị ụgbọ elu gọọmentị China (CAAC) machibidoro ndị mba ọzọ ịbanye China ebe ọ bụ na Machị 28, minista na-ebugharị agha kwesịrị itinye aka na CAAC iji kwe ka ụgbọ elu ụgbọelu na-ebugharị tianjin na Beijing, buru nnukwu ụlọ ọgwụ ụlọ 100 n'ụlọ.
N'ihi oke akwa ndị buru ibu, naanị akwa 28 na-eju ikike ụgbọelu ahụ dum.
Ministri a sokwa na ndị ọrụ ụgbọ elu nke China iji weta akwa 72 ndị fọdụrụ n'ụlọ ozugbo enwere ike.
Akwa ndị a ga - enyere aka ịchekwa ndụ ọtụtụ ndị ọrịa. Ana m ekele gị na ntọala mmanụ mba, ikuku ebura, onye nnọchi anya gọọmentị China na Malaysia na ndị ọrụ anyị na-ahụ maka ndị mba ọzọ maka enyemaka ha iji hụ na a na-ebugharị akwa ndị a na China na China. "
Na mgbakwunye, ministri ahụike nke Malaysia na-esi na China ebubata ngwa ngwa nlekọta elektrik 94 nke ndị ụgbọ elu Malaysia si na Shanghai gaa ọdụ ụgbọ elu mba Kuala Lumpur n'abalị ụnyaahụ. Ngwaọrụ ahụike a ga-enyere ndị otu ahụike na Malaysia aka ịchekwa ndụ dị oke ọnụ ahịa.